UFO | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တရုတ်ပြည် Chongqing လမ်းမပေါ်မှာ UFO တွေ့
09:54, August 27, 2009
သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က အမျိုးအမည်မသိရတဲ့ ပျံသန်းနေသောယာဉ် (UFO) တစ်စီးဟာ တရုတ်ပြည် Chongqing မြို့က Beibei Binjiang Road ပေါ်မှာ နာရီဝက်ခန့် ပေါ်ထွက်လာပြီး ပျောက်သွားခဲ့တာကို ဒေသစံတော်ချိန် ည ၁ဝနာရီ လောက်မှာ လူအတော်များများက မျက်မြင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ UFO ပေါ်နေစဉ်မှာ အနီးက ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ UFO ဟာ လေယာဉ်ထက်ပိုမြင့်တဲ့ အမြင့်မှာရှိတာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောကြောင်း ၊ နာရီဝက်ခန့် hover လုပ်ပြီးတဲ့အခါ UFO ဟာ ည ရဲ့ ကောင်းကင်ယံထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Original text posted at People’s Daily Online
Posted in Uncategorized. Tags: UFO. LeaveaComment »